Wararkii u dambeeyey ee Roobkii ka da’ay Puntland – Radio Daljir
Wararkii u dambeeyey ee Roobkii ka da’ay Puntland
Oktoobar 16, 2018 10:25 b 0
Roobab si fiican loogu qabowsaday, biyo dhigna ah ayaa ka da’ay inta badan deegaamada Puntland shalay ilaa iyo maanta.
Xiriiro kalle duwan oo Radio Daljir uu la sameeyey gobolada Sanaag, Bari, Mudug iyo Nugaal ayaa lasoo warinayaa inay jirin wax khasaare ah oo uu gaystay, iyadoo khuburada saadaasha hawada ay horay usoo saareen digniino ku’aadan duufaano suurtagal ah inay dhacaan.
Xoogga roobka ayaa waxaa uu ka da’ay gobolka Karkaar tuulooyinkiisa iyo miyiguba, sidoo kalle deegamaada Sheerbi iyo Waaciye ayaa roobku biyo dhigay.
Carmo iyo meelo kalle ayaa ka mid ah gobolka Bari degaamada uu qabtay roobka.
Gobolka Gardafuu badda ayaa kacsan oo wali shaqo tagin kalluumaysatada deegaamadaasi, balse waxaa wehliya dabaylo meelaha qaar, inkastoo wax khasaare ah lasoo sheegin, xiriiro aanu la samaynay maamulada degmooyinka iyo gobolka Gardafu.
Gobolka Sanaag waxaa uu roobka xooggiisa ka’day baadiyaha Dhahareed, deegaanka Baraagaha qol iyo ina waaxigeeda, laakiin sidoo kalle roob xoog leh ayaa ka da’aya dhulka buuraha ee Golis ee u dhow magaalda Bosaso iyo deegaanka Galgala ee gobolka Bari.
Gobolka Banaadir iyo Madaxa UNHCR ee Bariga Afrika oo ka wada hadlay Xal-u-helidda Barakacayaasha